ကွာတားဖိုင်နယ်အဆင့်မှာ တွေ့ဆုံမယ့် ဝေါ်ဇနီယာစကီ နဲ့ ဆွာရက်ဇ် နာဗာရို - Fox Sports Myanmar
ကွာတားဖိုင်နယ်အဆင့်မှာ တွေ့ဆုံမယ့် ဝေါ်ဇနီယာစကီ နဲ့ ဆွာရက်ဇ် နာဗာရို
သြစတြေးလျ အိုးပင်းပြိုင်ပွဲရဲ့ အမျိုးသမီး တစ်ဦးချင်းပွဲစဉ်တွေမှာတော့ ဝေါ်ဇနီ ယာစကီက မက်ဒါလီနာ ရိုင်ဘာရီကိုဗာကို အနိုင်ရရှိပြီး ကွာတားဖိုင်နယ် အဆင့်ကို တက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ပြိုင်ပွဲမှာ ဗိုလ်စွဲဖို့ အဆင့် ၂ အဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်းခံထားရတဲ့ ချက်နိုင်ငံသူ ဝေါ်ဇနီယာစကီကတော့ ပထမပွဲစဉ်ရဲ့ ပွဲငယ် ၃ ပွဲရောက်တဲ့အချိန်ထိ အကောင်းဆုံ ပုံစံပျောက်ဆုံးခဲ့ပြီး ၄ ပွဲမြောက်မှသာ ပြန်လည်လက်စွမ်းပြပြီး ၆-၃ နဲ့ အနိုင်ရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒုတိယပွဲစဉ်မှာလည်း ရိုင်ဘာရီကိုဗာကို ဝေါ်ဇနီယာစကီ အကောင်းဆုံး ထိန်းချုပ်ပြီး ရမှတ်ရယူနိုင်ခဲ့ကာ နောက်တစ်ဆင့်ကို သက်တောင့်သက်သာပဲ တက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
Winner! @CaroWozniacki ??#AusOpen pic.twitter.com/hfg6Reu8Os
အစောပိုင်း ယှဉ်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ ပွဲစဉ်မှာတော့ စပိန်နိုင်ငံသူ ဆွာရက်ဇ် နာဗာရိုက အန်နက် ကွန်တာဗက်ကို ကျော်ဖြတ်ပြီး သူမရဲ့ ကစားသမားဘ၀ တစ်လျောက် ၃ ကြိမ်မြောက် သြစတြေးလျ အိုးပင်း ကွာတားဖိုင်နယ်ကို တက်ရောက် နိုင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကွန်တာဗက်အနေနဲ့ ပထမပွဲစဉ်မှာ ၆-၄ နဲ့ အနိုင်ယူနိုင်ခဲ့ပြီး ဒုတိယပွဲစဉ်မှာလည်း ၄-၁ ရရှိတဲ့အချိန်ထိ ဦးဆောင်နိုင်ခဲ့ပေမယ့် ကစားကွက် ပြောင်းလဲဖို့ စိတ်ကူးလိုက်တာက သူမကို နောက်ဆုံးပွဲငယ် ၅ ပွဲဆက် ရလဒ်ဆုံးရှုံးစေခဲ့ ပါတယ်။
နောက်ဆုံးပွဲစဉ်မှာလည်း ၄-၄ မှတ်ထိ ရမှတ်တူညီနေခဲ့ပြီး ဆွာရက်ဇ် နာဗာရို အစွမ်းကုန် သုံးယှဉ်ပြိုင်ခဲ့တာကြောင့် ပွဲအပြီးမှာ ၈-၆ မှတ်နဲ့ အနိုင်ရရှိခဲ့ပြီး ကွာတား ဖိုင်နယ်အဆင့်မှာတော့ ဝေါ်ဇနီယာစကီနဲ့ ရင်ဆိုင်သွားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Home Tennis ကွာတားဖိုင်နယ်အဆင့်မှာ တွေ့ဆုံမယ့် ဝေါ်ဇနီယာစကီ နဲ့ ဆွာရက်ဇ် နာဗာရို